Taariikhda soo bandhigida ee Xiaomi Black Shark 2 waa rasmi | Androidsis
Xiaomi waa mid ka mid ah noocyada horay u heystay taleefannada casriga ah ee ay ku ciyaarto suuqa. In kasta oo sumadda Shiinaha waxay durbaba diyaarinaysaa inay soo saarto jiil cusub oo ka mid ah Shark Madow. Waxaa la isla dhexmaraayay dhowr todobaad in taleefankan uu imaan karo ka hor dhamaadka sanadka, si uu ula tartamo Razer Phone cusub. Haatanna waxaan haynaa xog dheeri ah oo ku saabsan soo bandhigida qalabkan, maxaa yeelay taariikhda soo bandhigisteedu waa mid rasmi ah.
Toddobaadyada ugu adag ee ka horreeya sumadda Shiinaha. Subaxnimadan maanta se wuxuu ku dhawaaqay taariikhda soo bandhigida ee Xiaomi Mi Mix 3 iyo hada Taariikhda uu imaan doono tan cusub ee Shark 2 ayaa la shaaciyey Ee sumadda. Toddobaad gudihiis waan la kulmi karnaa isaga.
Waxay noqon doontaa Oktoobar 23 marka Xiaomi Black Shark 2 si rasmi ah loo soo bandhigo. Jiilka cusub ee casriga ah nooca casriga ah ee ciyaaraha Shiinaha ayaa si rasmi ah u shaqeyn doona waqti yar kadib. Waa qayb sii kordheysa, waxayna raadinayaan inay ka faa'iideystaan ​​natiijooyinka wanaagsan ee tusaalahan uu suuqa ka helay.
Shirkaddu waxay ku qaban doontaa Shiinaha dhacdo ay ku soo bandhigi doonto qaabkan. Xilligan la joogo wax dhib ah kama lihin xog ku saabsan qeexitaankiisa. Waxaa jiray warar xan ah, laakiin ma jiraan wax la taaban karo. Sida jiilkii ugu horreeyay, qalab aad u xoog badan oo leh waxqabad weyn ayaa na sugaya.
Waxay umuuqataa in Black Shark-kan 2 lasiidayn doono aduunka oo dhan. Telefoonkii ugu horreeyay ma uusan helin baahinta ugu fiican adduunka, laakiin waxay umuuqataa in sumadda ay dooneyso inay ku bedesho qalabkan cusub. Si ay suurtagal u noqoto in laga iibsado suuqyo badan, waxay u badan tahay in Spain ay ka mid tahay.
Toddobaad gudihiis ayaan ku ogaan doonnaa wax walba oo ku saabsan Xiaomi Black Shark 2. Waxaan si taxaddar leh u dhegeysan doonnaa xogta aan ku helno taleefanka. Anaguna waxaan ula socon doonaa dhacdadan si xiiso leh Oktoobar 23-keeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Black Shark 2 horeyba wuxuu u lahaa taariikh soo bandhigid
Sida loo qaabeeyo Blokada, xanibaha ugu fiican ee xayeysiiska, codsiyada iyo ciyaaraha